सीमानासम्म थुतुनोमात्र घुसार्ने रेलको कुरा गरेको होइनः प्रधानमन्त्री::KhojOnline.com
असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणलाई असाधारण र अभूतपूर्व भनेका छन् । भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको र नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने नेपालीको चाहना मार्गप्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
रेल मार्ग निर्माण आजको भोलि सम्भव नहुने भन्दै उनले त्यसका लागि प्रक्रिया शुरु भएको बताए । ‘रेल आजको भोलि हुने जादु होइन, प्रक्रिया अब शुरु हुन्छ’, उनले भने ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले चीन भ्रमणको सेरोफोरोमा रहेर प्रधानमन्त्री अाेलीसँग गरेको कुराकानीः
चीन सरकारले उच्च सम्मानका साथ यहाँलाई स्वागत गर्यो, योसँगै १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भई नै सकेको छ, सारमा यसबाट हामी कत्तिको उत्साहित हुन सक्छौँ ?
स्वाभाविकरुपमा चीन हाम्रो लगत्तैको मित्रराष्ट्र मात्र होइन, एउटा भरपर्दो तथा सधैँको सहयोगी मित्र राष्ट्र हो । कुनै समस्या नभएको मित्रराष्ट्र हो र हामीलाई सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र हो । यसभन्दाअघि सन् २०१६ को मार्चमा मैले चीन भ्रमण गरेका बेला जुन सहमति भएको थियो, जुन संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित भएको थियो । त्यस बेलाका कुरा नै ऐतिहासिक कुरा हुन् । नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने ती सम्झौता संयुक्त विज्ञप्तिले देखाएका थिए । तीनै सम्झौतालाई आगडि बढाउने र अरु थप समयानुकूल लिने हाम्रा आवश्यकता हुन् । तदअनुसार नै हामीले कुराकानी गर्यौँ, हामी यथार्थमा आशावादी नहुनुपर्ने कारण नै छैन ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, यो भ्रमणको सबैभन्दा चासोको विषय रेलमार्गको थियो, बेइजिङमा भएको सहमतिले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भावनालाई कत्तिको बलियो बनाएको छ ?
अवश्य नै यो सर्वेक्षण गरिनसकेको विषय हो । अहिलेसम्म हाम्रो इच्छामा निर्भर रहेको विषय हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले काठमाडौँसम्म रेल पुर्याउने आफ्नो भिजनका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यो रेल सिगात्से पुगेको छ, अब त्यहाँबाट केरुङ हुँदै काठमाडौँ र पोखरा तथा लुम्बिनीसम्म पुग्ने हो । अहिलेको हकमा काठमाडौँ न्यूनतम गन्तव्य हो ।
अबको समयमा राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले प्रणाली, सामाजिक प्रबन्धका हिसाबले, सुशासनका हिसाबले अथवा आर्थिक विकासका हिसाबले कसरी अगाडि जाने नेपाल ? त्यसैले मैले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको हो । त्यो अकारण छैन । त्यसैअन्तर्गत हाम्रो रेलको सम्बन्धमा कुनै देशबाट ल्याएर हाम्रो सीमानासम्म थुतुनोमात्र घुसार्ने रेलको कुरा गरेको होइन । पूर्व–पश्चिम रेलको कुरा, राजधानीसम्म आउने रेलको कुरा, काठमाडौँ–पोखरा जाने रेलको कुरा, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने रेलको कुरा, अथवा थानकोट–धुलिखेल चल्ने रेल अथवा काठमाडौँ–वीरगञ्ज चल्ने रेलको कुरा नेपाललाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल) हो । सम्पर्क सम्बन्धका, आवागमनका, परिवहनका सबै माध्यम र सूचना र सम्बन्धका सबै क्षेत्रलाई आधुनिक ढंगबाट विकासका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएकाले रेलमार्गसम्बन्धी प्रश्न फेरि उठेको छ र यसको अध्ययन टुंग्याउने र कामहरु अगाडि बढाउने अवधारणामा हामी गएका छौँ ।
त्यो सहमति भएको छ । हामीलाई हाम्रै उत्तरी भेगमा एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा पुर्याउनका लागि धेरै ठूलो समस्या थियो । अथवा, उत्तरी भू–भागको एक ठाउँबाट अर्को भू–भागमा जान मात्र होइन कि, औषधि पुर्याउनु परेमा, राहत तथा उद्धारका सामग्री पुर्याउनु परेमा, महामारीको बेलामा आवश्यक सामग्री पुर्याउनु परेमा, त्यस्ता बेलामा सामान पुर्याउन अप्ठ्यारो थियो । त्यस्तो बेलामा अस्थायीरुपमा आग्रह गरेर तिब्बती राजमार्ग प्रयोग गर्ने गथ्र्यौं । जतिबेला समस्या पर्छ त्यतिबेला काम शुरु गथ्र्यौँ ।
अब त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । हामीले तत् सम्बन्धमा चीनको तिब्बतको राजमार्गलाई प्रयोग गर्न सक्ने र उत्तरी भेगको कुनै पनि भेगमा हामीले सामान पुर्याउन सक्ने भएका छौँ । धैरै अनुकूलता भएको छ । अब तिब्बत सरकारका प्रमुखसँग मैले दुईपल्ट कुरा गर्दा उहाँहरु यसमा अत्यन्त सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँहरुको भावना सकारात्मक छ । उहाँहरुको सहयोग सकारात्मक ढंगले सहयोगी भावनाका साथ अगाडि बढ्छ ।
यतिबेला म भन्न चाहन्छु, नेपालले कुनै हल्काफुल्का क्षणिक कूटनीति गर्न चाहेको छैन, गरिरहेको छैन, गर्न चाहिरहेको छैन । कसैले कार्ड प्रयोग गर्ने भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्छन्, उत्तरी कार्ड, दक्षिणी कार्ड भन्ने प्रयोग गर्छन् । हामी कार्ड प्रयोग गर्ने होइन, मित्रता अगाडि बढाउन चाहन्छाैं, दुवै छिमेकीसँग । यसभित्र कुनै कार्ड खेल्न खोजिने हाम्रो मनसाय हुन पनि सक्दैन, छँदा पनि छैन । र, हामी त्यस्ता कुरामा विश्वास गर्दैनौँ । हामी मित्रतामा विश्वास गर्छौं । हाम्रो मित्रता र हामी हाम्रा छिमेकीसँग पनि मित्रता अभिवृद्धिका लागि हाम्रो मित्रता उपयोग हुन सकोस् । हामी अरुको मित्रतामा सहयोगी हुन सकूँ, त्यो भूमिका खेल्न सकूँ भन्ने चाहन्छौँ ।
व्यावहारिकरुपमा त मैले भारत भ्रमण गरेँ । त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । त्यसपछि फटाफट काम हुन थाल्यो । त्यो व्यवहारमा देखिएको छ । चीन भ्रमणका उपलब्धि पनि क्रमशः देखिँदै जानेछन् । रेलजस्तो कुरा आजको भोलि कुनै जादु होइन, तर सर्वे तुरुन्त प्रारम्भ हुन्छ । प्रक्रिया शुरु हुन्छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक पार्कहरु र उद्योगहरु तथा सहयोगका क्षेत्रहरु विस्तार हुन्छन्, काम शुरु हुन्छ । र, द्रूतगतिले काम शुरु हुन्छ । त्यसैले यी सबै कुरा प्रमाणित हुन्छ ।
मानिसहरु सोचिरहेका हुन्थे, कूटनीति भनेको नबोल्नु, चुप लाग्नु हो । कतिले जे गरेपनि सहनुलाई कूटनीति ठान्ने, कतिले एकतिर ढल्कनुलाई कूटनीति ठान्ने र कतिले चिप्ला कुरालाई कूटनीति ठान्ने होइन, हामी त राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राखेर न्यायोचित कुरालाई केन्द्रमा राखेर, अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानून र अब्लिगेसन (प्रतिवध्दता) लाई केन्द्रमा राखेर न्यायोचित ढंगले अगाडि बढ्छौँ । र, मैत्रीभावलाई सबैभन्दा मुख्य स्थानमा राखेर अगाडि बढ्छौँ भने हाम्रा नीतिहरु ठीक छन्, सही छन् । हामी यी नीतिमा सफलताकासाथ अगाडि बढेका छौँ, जो व्यवहारले देखाएको छ ।
भदौ, काठमाडौं । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालमा आएर उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेको भोलिपल्टै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलबार भिडियो संवादमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिए र पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गरे । मोदी आफैंले पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल–भारत राजनीतिक तहमा अभूतपूर्व समझदारी कायम भएको बताउनु र चिनियाँ राष्ट्रपति...
भदौ, काठमाडौं । पूर्व सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिएको अभियोगमा पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने पाँच लाख धरौटीमा छुटेका छन् । सोमबार जिल्ला अदालत, चितवनमा थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायधीश हेमन्तप्रकाश रावलको इजलासले लामिछानेलाई ५ लाख , सञ्चारकर्मी युवराज कँडेललाई ३ लाख र नर्स...
काठमाडौँ — मासामिची साइगो नेपालका लागि राजदूत भएर एक वर्षदेखि काठमाडौंमा छन् । नेपालका हिम चुचुरा, गाउँको हरियाली र नेपालीहरुको संस्कृति मन पराउने उनी एक राजदूतका रुपमा नेपाललाई कसरी हेर्छन् ? फुर्सदमा कहाँ घुम्न जान्छन् र नेपालबारे के सोच्छन् ? कान्तिपुर अनलाइनका लागि घनश्याम खड्काले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित...
नुवाकोट (ककनी) । नेपाली कांग्रेसका नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले शेरबहादुर देउवालाई ‘निकम्मा सभापति’ को उपमा दिएका छन् । देउवा नेपाली कांग्रेसको जीवनमा सबैभन्दा निकम्मा सभापति भएकाले अब उनीबाट पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने केसीको ठहर छ । प्रस्तावित विधानका विवादित विषयमा छलफल गर्न भन्दै कांग्रेसका जिल्ला...